Kyrgystan: Tambatsary tsy misy hevitra politika · Global Voices teny Malagasy
Kyrgystan: Tambatsary tsy misy hevitra politika
Voadika ny 05 Marsa 2009 9:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, English
Tapitra ny vanim-potoanan’ny ririnina, ary miandry ny lohataona mafana I Kyrgyzstan: ny fivorivoriana, ny hetsika fitakiana sy ny sisa. Kanefa aleho kosa mba hiresaka ny hatsarana isika e, fa tsy hoe ny politika tsisy farany io foana. Mba nanao ahoana izay ny sarin-drininina tao Kyrgyzstana?
Nendefa am-bolongana ny sary tokan’ilay olo-malaza mpilalao sarimihetsika Kyrgyz antsoina hoe Suymenkul Chokmorov ny mpikirakiran’ny Livejournal doctormoro. Tsy manam-paharoa ny tantaran’ity sary ity. Misy mpakafy ny fakantsary fahagola iray tao amin’ny fifaneraseram-pifandraisana anterineto Diesel (Diesel Internet forum). Indray mandeha no nisy vehivavy vitsivitsy nanome azy horonantsary maro. Notarafiny izy ireo ary hitany tao ny sary noraisina avy tamin’ny vata fanandramana ilay horonantsary antsoina hoe “The Scarlett Poppies of the issyk-Kul” (ilay voninkazo menan’I Issyk-Kul) sy ireo sary notifirina nandritra ny fangoronana io horonantsary io ihany. Nomen’ity lehilahy ho an’I Doctormoro ireo sary voatifitra ary naheliny tao anatin’ny blaoginy izy ireo.
Sary tsy manampaha-roa misimisy kokoa no hita ao anatin’ny bolongany [ru]. Soratan’ny mpikirakiran’ny Livejournal antsoina hoe Azamat Imanaliev aka azzzik ny andalana hafa mikasika ny zavatra tena mahavariana mahakasika ny diany nankany Etazonia ny taona 2007 miaraka ireo kararazan-tsary mahafinaritra. Mba vakio anie ny tantaran’ny dia nataon'i azzzik e, ary mba jereo hoe ahoana ny fomba fijerin’ny olona Kyrygzstany an’I Etazonia!
Vakio ary Jereo ireo sary ao anatin’n blaogin’ny Azzzik [ru]. Mba fantatrao ve hoe maro ireo olona Kyrgyzstanis no tia milalao hockey? Fantatrao ve fa nisy amboaran’ny lalao hockey tao Kyrgyzstan vao tsy ela akory izay? Tsia? Koa raha izany dia mba jereo ary ity, amarino tsara ary ankafihizo! Isaorana i azzzik tamin’ny fandehanana nijery ity amboara ary naka sary marobe.
Hitanao eto misimisy kokoa ny sarina lalao hockey [ru]. Nandeha nijery fifaninanana korisan-kapila an-dranomandry (snowboard) tao kazakhstana ny mpikirakira LiveJournal _jpeg. Diso fanantenana izy tamin’ny vokatra azon’ny mpilalao korisan-kapila an-dranomandry Kyrgyz, fa sary mahafinaritra aok’izany kosa anefa no nentiny na dia teo aza ny hatevin’ny zavona.
Ankafihizo ny sarin’ny ranomandry ao amin’ny Flickr! hoy ny mpikirakira liveJounal nuraika [ru]:
Nanome antsika tsio-drivotra mahafinaritra ny volana Febroary ary omeny ny horoka avy tamin’ny ranomandry farany. Mamampalahelo kely fotsiny fa tsy hahita ranomandry intsony ato ho ato….
Veloma ry mpamaham-bolonganan’ny ririnina! Ho avy eny amin’ny Kyrgyzstan tsy mety reraka ny loko sy ny hetsiky ny mpamaham-bolongan’ny lohataona!
Tantaran'ny Kyrgyzstan farany
16 Septambra 2021Azia Afovoany sy Kaokazy
24 Febroary 2020Azia Afovoany sy Kaokazy